5 Kuhle Iziphuzo Local Ukuze Phuza Futhi Zama EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Iziphuzo Local Ukuze Phuza Futhi Zama EYurophu
Europe yindawo emangalisayo umhlangano kwabaningi namasiko ehlukene - futhi amasiko Culinary. Zonke izizwe has ubunikazi bayo obuhlukile, eveza izivakashi ngqo nomlando wayo nakho konke okunye inikeza. Futhi emazweni athile, ukuthi futhi kusho iziphuzo flavorful!
Labo ukuhamba ukuze ajabulise nolwanga lwakho futhi ube ezinye bendawo kumnandi evunyiwe bayojabulela ngokuvakashela kula mazwe. Nazi top yethu 5 engcono iziphuzo bendawo ukuba baphuze bese uzame eYurophu:
1. Kuhle Iziphuzo Local E-Italy: Limoncello
Limoncello is yafika emangalisayo Italian ukuthi ungathola yonke onqamula zwe elihle. Nokho, uma ufisa ukuzama lokhu lemon oludakayo ukukhanya at zizinhle, ikhanda ukuze Amalfi. Lapho, phezu enhle Amalfi Coast, benza limoncello kusukela ulamula best lonke elase-Italy. Indlela yokuqala eyenza lesi siphuzo ukunambitheka njengengelosi lemonade elimnandi okungukuthi kancane kuphela amnandi. Nokho, ukuphuza ke kancane ngokucophelela, ngoba amandla ayo kungathatha wakubuza.
Naples ukuze Salerno Izitimela
Naples ukuze Pompei Izitimela
Rome eNaples Izitimela
Bari eNaples Izitimela
2. Bordeaux Kuhle Local Wine - France
Ukuze umthandi iwayini, omunye iziphuzo sendawo engcono uzame eYurophu ngokuqinisekile siyoba Bordeaux iwayini. Ngisho nakuba singesomuntu ukuthekelisa abadumile French, ngokuqinisekile okuhlangenwe nakho lokuphuza lesi iwayini enkulu ngesikhathi Bordeaux. A iwayini tour ngendlela ephelele ukuhlola esifundeni futhi iwayini yayo. Ngaphezu kwalokho, uyofunda okuningi mayelana nokwenza iwayini, langa zaseNormandy, futhi microclimates.
Uma uzithola eLondon ngesikhathi sasehlobo, wena umane abakwazi ukushiya ngaphandle amasampuli Pimms Cup. Kwaba James Pimm owasungula isiphuzo in the 1800s maphakathi, futhi wakhonza ke enkomishini esikhulu lapho waboleka igama lakhe. Kuyinto isiphuzo esiqabulayo ehlanganisa fizzy lemonade futhi Pimms Cha. 1, kanye izithelo tincetu kanye Mint amahlumela ngesikele sokuthena. Kasibili okumnandi, futhi ilungele ejabulela ngosuku ehlobo omnene yezilungiselelo engadini, Pimms Cup kuthanda charm wena.
4. Kuhle Iziphuzo Local EJalimane: schnapps
eJalimane, Schnaps kuyinto Gnostic okwesikhathi olunamandla oludakayo ukuthi ungaba ezihlukahlukene flavour. Ngokwesibonelo, ungase ube Schnaps elinuka noma elinye ikhambi lokuphumuza based. Nomaphi lapho umuntu omkhethayo, uzobe kokuba siphuzo esithandwayo wendawo ezokwenza zivuse umoya Germany. Abantu bakule ndawo, abathanda ukuba Schnaps emva enkulu, ukudla esindayo, lapho amandla ayo isiza ekugayeni ukudla esiswini. Ngakho uma wena eJalimane, ukhululeke ukuba benze idili futhi baphuze kuze!
5. Westvleteren Abbey Kuhle Local Beer EBelgium
Belgium kuyinto yinye ubhiya, mhlawumbe kaningi kunokuba Germany. Kodwa phakathi kwawo wonke wendawo emangalisayo besizulu Belgian, ukhona ofunayo Uzokulahla ezinyaweni zakho. Abbey besizulu, owaziwa nangokuthi Trappists, athandwa kakhulu eBelgium, kodwa Westvleteren abbey ubhiya nguye eziyivelakancane. Ukuze ukuthole, udinga bekisa it kusukela yesonto 60 izinsuku ngaphambi kwesikhathi. Nokho, kuwufanele inkathazo.
Ukulungele ujabulele iziphuzo umhlabeleli wendawo Europe banganikeza? Phathani izikhwama zakho, ukwenza izinhlelo zakho, futhi ikhanda Ekusindiseni Isitimela ukuze Bhuka zemininingwane lakho Amathikithi ukubona Europe ngendlela ehlukile wonke!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle Iziphuzo Local ukuze Zama eYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-local-drinks-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / nl ku / uyeke noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#iziphuzo #traveleurope E-Italy London imvuenline travelfrance travelgermany traveltips